आज कतिबजे हुँदैछ मिस वल्डको फिनाले ? लाईभ भिडियो यहाँबाट हेर्नसकिन्छ (तरिका सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > आज कतिबजे हुँदैछ मिस वल्डको फिनाले ? लाईभ भिडियो यहाँबाट हेर्नसकिन्छ (तरिका सहित)
चीनको सान्यामा आयोजना गरिएको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा आज हुँदैछ । एक महिनादेखि विभिन्न विधामा भैरहेको प्रतियोगिताका स्पर्धामा १ सय १८ मुलुकका सुन्दरीले सहभागीता जनाएका छन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुन चीन पुगेकी मिस नेपाल २०१८ श्रृंखला खतिवडाले दुई वटा महत्वपूर्ण स्पर्धामा जित हासिल गर्दै अन्तिम ३० मा स्थान बनाएकी छिन् ।
आजको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा अन्तिम १५ पछि अन्तिम ५ को छनोट गरी उपाधि घोषणा गरिनेछ । आज नेपाली समय अनुसार दिउँसो ०४:४५ बजेदेखी मिसवल्डको फिनाले सुरु हुनेछ । उक्त कार्यक्रम (लाईभ हेर्नको लागि यहाँ निलो अक्षरमा क्लिक गर्नुहोला) मिसवल्ड डटकम बाट एक डलर तिरेर पे पर भ्यु हेर्न सकिने छ । लाईभ कार्यक्रम चल्दाचल्दै त्यहाँ बाट पनि शृंखलालाई भोट गर्न सकिने छ ।
श्रृंखलाले मिस वल्र्डको ब्यूटी विथ अफ पर्पस अवार्ड जितेकी छिन् । सन् २०१३ मा ईशानी श्रेष्ठले जितेको ब्यूटी विथ अफ पर्पस अवार्ड नै अहिलेसम्म नेपालले मिस वर्ल्डमा हासिल गरेको एक मात्र टाईटल अवार्ड हो । २३ वर्षिय श्रृंखलाले ललितपुरको पुल्चोक ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसबाट आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकी छिन् ।
उनका बुबा विरोध खतिवडा नेकपाका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा सांसद हुन् भने आमा मुनु खतिवडा नेकपा मकवानपुरकी अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा ३ कि सासंद हुन् । राजनीतिक पृष्ठभुमि र अध्ययनमा अब्बल भएका कारण पनि श्रृंखलाले मिस वर्ल्डमा नेपाललाई कुनै न कुनै उपाधि जिताउने आशा गरिएको छ ।
कोरोनाको खोप लगाएको केही घण्टामै ५२ जनाको स्वास्थ्य बिग्रियो, एकजनाको अवस्था गम्भीर !
मध्यरातमा अस्पताल भित्र पुग्दा फिलिपको दर्दानक अवस्था, क्रिस्टिना आईन मिडियामा…(हेर्नुहोस् भिडियो)